पुनःनिर्माणका लागि गोरखा दरबार भत्काइयो – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ०२, २०७४१२:०५0
गोरखा, २ फागुन । भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक महत्व बोकेको गोरखा दरबार भत्काइएको छ । करिब चार सय वर्ष पुरानो गोरखा दरबार भत्काएर जगदेखि नै पुनःनिर्माण गर्न लागिएको हो । विसं १९९० को भूकम्पले क्षति नपुगेको दरबार बारपाक केन्द्र रहेर २०७२ बैशाख १२ मा गएको गोरखा भूकम्पले क्षति पुगेको थियो ।
भूकम्पका बेला क्षति पुगेको गोरखनाथ मन्दिरलगायत संरचना भने पुनःनिर्माण गरिसकिएको छ । दरबारमा रहेका राजा पृथ्वीनारायण शाहका गद्दीलगायत महत्वपूर्ण सामग्री भने सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गरिएका छन् । दरबार भत्काउँदा विसं १८६३ का बेलाका इँट्टा पनि फेला परेका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र दरबार पुनःनिर्माण सकिने बताइएको छ । रासस
मलयाली अभिनेत्री प्रिया प्रकाशको भिडियो सार्वजनिक, बलिउड स्टार समेत पछि परे !
प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनको सरकार, कांग्रेस प्रमुख प्र्रतिपक्षी दलसमेत भएन
यी ८ तरिका अपनाएर बढाउनुस् आफ्नो मोटरसाइकलको माइलेज
कतै तपाईले नक्कली अण्डा किन्ने गर्नुभएको छैन्, यसरी छुट्याउनुहोस् नक्कली र सक्कली अण्डा
सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा करेन्ट लागेर मृत्यु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव मुम्बई प्रस्थान
आफ्नै शिशु मार्ने आमा पक्राउ
पहिचान ‘मागेर या बिन्ती चढाएर’ पाइँदैन
मानव तस्करीको आरोप लागेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई उन्मुक्ति, अस्ट्रेलिया सरकारले के गर्ला ?
डा.केसीको अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, केदारभक्त माथेमा हिँडे इलाम